Somaliland Guardian: Guddoomiyaha KULMIYE oo si aan hore loo arag loogu soo dhaweeyay Hargeysa (DAAWO SAWIRRADA)
Hargeysa (Somaliland.Org)- Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee KULMIYE Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa maanta si ballaadhan loogu soo dhaweeyay Madaarka Hargeysa, ka dib markii uu socdaal kaga soo laabtay dalalka Maraykanka iyo Itoobiya oo uu soo maray.
Kumannaan dadweyne ah ayaa maanta kala xidhay Jidadka Magaalada, isla markaana waxa guud ahaanba maanta joogsaday dhaqdhaqaaqyada Gaadiidka, marka laga reebo kuwa ka qayb-qaadanayay soo-dhawaynta Guddoomiyaha KULMIYE, kuwaas oo qiyaastii dhawr boqol oo Gaadhi tiradoodu gaadhaysay.
Guddoomiyaha KULMIYE wuxuu bulshada uga mahad-naqay soo-dhawaynta ay u sameeyeen oo uu sheegay inay si gaar ah u taabatay. "Waxa aad iyo aad ii taabatay soo-dhawaynta qiimaha leh ee ay shacabkaygu ilaa intii aan Madaarka ka soo socday aad ii soo dhawayseen, waxaanan ku maqnaa danaha Somaliland iyo qaddiyaddeena Aqoonsiga waxtar u leh, hase ahaatee, wixii faahfaahin ah dib baanu idiinka soo bandhigi doonaa." Ayuu ku yidhi Axmed-Siilaanyo hadalkiisii.
Posted by Ahmed Hassan Arwo at 6:35 AM